Evinrude 3 HP Lightwin Akụ-Up Project | Outboard Boat Motor Mmezi
Evinrude 3 HP Lightwin Akụ-Up Project
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ ajụjụ gbasara Evinrude 3 HP Lightwin, ma ọ bụ ọrụ yiri Tune-UP, biko hapụ ha n'okpuru.
Ị ga-emerịrị ya Banye ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị ịhapụ ihe.
osụk site ttravis on Tus, 09 / 25 / 2018 - 20: 54
Na zaghachi Idei mmiri by Ụkwụ
Echere m na nsogbu ahụ bụ ...
Echere m na nsogbu ahụ dị na agịga na oche, ma ọ bụ mgbanwe nke ugbo.
M ga-agbalịa ịmegharị ugbo ahụ ka ọ dị ntakịrị ala n'ihi na ọ ga-eme ka mmanụ ọkụ kwụsị ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ, m ga-arụnye mgbanaka ọhụrụ, clip, na oche. Jide n'aka na ị dochie ihe atọ niile site n'otu set. Ịgwakọta akụkụ dị n'etiti setịpụ nwere ike ime ka ọ bụrụ na ekwesighi ekwesighi ma rụọ ọrụ. O nwere ike ịbụ na ọ dị gị mkpa ịnweta ọkwa ọhụrụ carb ma ọ bụrụ na ịnweta otu.
Ọ bụrụ na m nwere nọmba nlereanya gị, m ga-enye njikọ. Nke a bụ ma eleghị anya 18-7038 Sierra Carburetor agịga na Seat
Echeghị m na ndị Jets ga-eme ka carb ahụ mebie n'ụzọ ị kọwara.
O yiri ka ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ. Adala mbà.
osụk site Ụkwụ on Tus, 09 / 25 / 2018 - 22: 53
Na zaghachi Echere m na nsogbu ahụ bụ ... by ttravis
Ndụmọdụ dị mma. M ...
Ndụmọdụ dị mma. M na-agbasapụ mgbakọ ahụ, gbanwee ụgbọ mmiri ahụ, ma mee ka ihe niile gbanwee. Ugbu a, ọ na-agba ọsọ. Oge nke atọ bụ amara. Daalụ.
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 08 / 07 / 2019 - 01: 12
Ọ bụ larịị gị, ka…
Ọ dị larịị, ka ọ dị obere karịa n'okpuru larịị? May nwere ike ịnwa ịhazigharị ya iji jide n'aka na ọdụ agịga niile mgbe enwere ụta na ụta. Enwere m ihe osise ebe ọ bụla n’usoro ịkụgharị m. Ọzọkwa, jiri agịga na oche nke jikọtara kit ahụ ọnụ. Ha kwesịrị ịdị ka otu ụzọ.
osụk site mmdahl Na Sun, 09 / 30 / 2018 - 08: 30
Ntụgharị maka otu tank tank
Adị m ọhụrụ na saịtị a ma ana m ekele gị maka nnukwu ihe a niile. Ana m arụ ọrụ na CD-11 Johnson. Ana m agbalị ịmegharị ya ka ọ rụọ ọrụ na otu tank tank. Enweela m mpempe ụgbọala Mikuni ma jiri usoro 7 / 16 nkwụnye iji nweta usoro. M na-eji eriri ọkụ na-emepụta ihe ma ana m ahụ na eriri ahụ ji nwayọọ nwayọọ jupụta mmanụ na-agba ọsọ. Mgbe banyere 5 min. akwụsị mmanụ ọkụ akwụsịla ọrụ. Enwere m ike igbapu mmanụ ọkụ site na nchịkọta ya ma ọ ga-agba ọsọ ruo mgbe mmanụ ga-abanye n'ime eriri. Echere m na mmanụ ụgbọ ahụ na-abịa site n'itepụta ọkụ ọkụ na-emepụta mmanụ ụgbọala, ma o yiri ka ọ na-esi n'ụgbọ ahụ apụta. Ọ dị onye ọ bụla nwere nsogbu a?
osụk site ttravis Na Sun, 09 / 30 / 2018 - 11: 13
Kedu ihe ị na-ekwu site na 7 / 16 ...
Kedu ihe ị pụtara site na 7 / 16 nkwụnye usoro?
osụk site mmdahl Na Sun, 09 / 30 / 2018 - 13: 17
Na zaghachi Kedu ihe ị na-ekwu site na 7 / 16 ... by ttravis
Ka m kwuoghachi ya. Eji m mpempe agụụ, nke m kwenyere bụ 7 / 16 ", ọ dị mma iji kpoo otu valvụ valị ego mgbe ọ na-ewepụ valvụ ego. Echere m na m gbasoro ntụziaka ahụ n'ụzọ ziri ezi.
osụk site ttravis Na Sun, 09 / 30 / 2018 - 23: 37
Na zaghachi Ntụgharị maka otu tank tank by mmdahl
Amaghị m ihe ga- ...
Amaghị m ihe ga-akpata nke ahụ. Anaghị m eji usoro mmanụ ọkụ. Agaghị m ahụ otú akara akara nwere ike isi jupụta mmanụ ma ọ bụrụ na mmanụ ọkụ gị adịghị mma.
Amaara m na nke a abụghị ihe ngwọta, ma emeela m usoro a n'onwe m ma amata m na ọtụtụ ndị ọzọ enweela kemgbe m bipụtara usoro a karịa afọ iri gara aga. N'ikpeazụ, mgbe ọtụtụ afọ ọchị gasịrị, moto 5.5 m nyere aka n'ihi na akara aka nke elu crankshaft jọrọ njọ ma achọtaghị m onye nchọta. Echere m ịbanye n'ime ụgbọ oloko ọma n'oge oyi a ma buru mgbawa ọzọ na ya.
osụk site mmdahl na Solomon, 10 / 01 / 2018 - 07: 17
Na zaghachi Amaghị m ihe ga- ... by ttravis
Daalụ maka ndenye. M ga ...
Daalụ maka ndenye. M ga-agba mbọ imezi ma ọ bụ dochie mpempe mmanụ. Enweghị m mgbatị mmiri abụọ, n'ihi ya enwere m oke mkpali ime ọrụ a. Site na eriri a na-agbanye n'ụzọ dị otú a, enwere m ike ịhụ ebe mmanụ si abịa.
osụk site fabelknap na òtù ezinụlọ, 09 / 25 / 2019 - 08: 35
Na zaghachi Daalụ maka ndenye. M ga ... by mmdahl
HI, Ana m arụ otu ụgbọala na otu mgbapụta mmanụ ọkụ, na-enwe otu nsogbu. Ọkụ si n'akụkụ akụkụ ahụ na-abịa. You nwetụla mgbe ị chọpụtara mkpebi a? daalụ
osụk site boatman350 on Fraị, 10 / 12 / 2018 - 22: 01
hey guys m azụ mgbe echere akụkụ
Ezigbo ndị m nwere 3hp lightwin na oge ikpeazụ m kwuru na enwere m isi mkpuchi isi. Enwetara m ihe ohuru ma o buru ibu buru ibu n'eziokwu. Ọ malitere ibido na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ndị amoosu agbagharaghị m na ọ bụ na ọ dịbeghị anya (ọ bụ ihe ọ bụla na-eche na nke a?) Ma ugbu a, nsogbu bụ isi bụ isi mmiri na-eme ka m wee nwee ihe ọhụrụ ma chọọ enyemaka na m ya na mgbakọ ahụ.
kelee onye ọ bụla obi ụtọ ịlaghachi na ndị mmadụ
osụk site ttravis on Nọdụ, 10 / 13 / 2018 - 00: 04
Otutu nke vidiyo YouTube ...
Ọtụtụ vidiyo vidio YouTube na nke a. Emewo m usoro a n'onwe m ma m nwere ike ịgwa gị na ọ bụghị mma! Ọ na-ewe m otutu ule na njehie dịka ihe ọ bụla dị na njedebe.
Mee onwe gi ihu ọma ma buru otutu foto na ekwentị / igwefoto gi ka i wee nwee ike ikpuchi otu o si agaghachi.
Kpachara anya ka mmiri ahụ nwee ike ịdị ize ndụ. Jide n'aka na ị gaghị ekwe ka ọ gbapụ. Ị ga-achọ ka ị nwere ogwe aka nke atọ ma aka.
osụk site boatman350 na Solomon, 10 / 15 / 2018 - 22: 54
ekele gị tttavis
Enwetara m ya na ọ dị mfe, ma enwere m ya n'echiche ọzọ ihe uru ụgbọala m ga-abụ ka onye ọ bụla nwee ike inye m atụmatụ. 1957 evinrude lightwin 3 adịghị eweghachite ihe ọ bụla na-ezighị ezi bụ paint chipped
osụk site ttravis on Tus, 10 / 16 / 2018 - 08: 01
Na zaghachi ekele gị tttavis by boatman350
Ọ na-enye m nnukwu ...
Ọ na-enye m afọ ojuju dị ukwuu n'ịmara na ị nwere ike ịnweta ụgbọala gị ma na-agba ọsọ, ikekwe site n'enyemaka ụfọdụ ịmepụta saịtị a. Oge ọ bụla onye dị ka gị na-edozi bọmbụ ụgbọ mmiri ochie ka ọ nwee ike ịnụ ụtọ ya, mee ụwa ka ọ bụrụ ebe ka mma.
O di nwute na obere obere ihe a abaghi ​​uru nke ego. Nye mụ na ndị ọzọ, ha bara uru dị ukwuu n'ihi na ha bụ ihe dị mma maka ụgbọ mmiri dị iche iche na nke zuru okè maka nwa ewu iji mụta. Naanị ị nwere ike ịzụta ihe ọhụrụ ọ bụla n'okpuru $ 800 nke nwere ebe ọ bụla na nso obere obere ọkụ. Okwu ahụ "Ha anaghị eme ka ha dị ka ha na-emebu" bụ eziokwu. Na ihe niile a na-ekwu, m ga-eche na ị nwere ike ịnata n'etiti $ 300 na $ 400 na eBay.
Ọ bụrụ n'ezie na ị gaghị ere ya, enwere m obi ụtọ ịhụ ka ị depụtara na "Ihe ere" na saịtị a. Ị nwere ike ịbụ onye mbụ ime nke a!
Enwere ọtụtụ maka ire ere na eBay. Otu n'ime ihe m na-arụ ọrụ n'ebe a, ugbu a, na-etinye eBay njikọ n'akụkụ niile na motọ (ọtụtụ puku mmadụ) iji nyere ndị mmadụ aka ịhụ ihe ha chọrọ maka ọrụ ha. Iji njikọ ndị a na-enyere aka ịmepụta ego iji debe saịtị na ọrụ ndị a na-aga n'enyeghị ego iji nweta ego.
Pịa ebe a iji hụ ndepụta maka motọ yiri nke gị.
Ọzọkwa, abụ m onye so na ya The Antique Outboard Motor Club, Inc. ebe ha na-edekwa motọ maka ire ere ma enwere ọtụtụ ndị ga-achụga snow na ọtụtụ nchịkọta iji bulie gị elu.
Maka onwe m, enwere m obi ụtọ dị ukwuu n'ịgbatị ma na-enye ụgbọ mmiri na motọ ndị kwesịrị ekwesị nke ọgbọ ndị ọzọ. Ebe a na-enweta ego zuru oke iji kwado mmesapụ aka na ntụrụndụ m.
N'ọnọdụ ọ bụla, obere Lightwin ahụ ị kwadoro kwesịrị ka ezigbo ụlọ na onye nwe ya ga-enwe ekele maka ya.
osụk site boatman350 on Tus, 10 / 16 / 2018 - 23: 01
Enwere m ọtụtụ enyemaka site na ebe nrụọrụ weebụ gị, enwere m nnọọ obi ụtọ ịchọta ya na ozi a niile. M depụtara ya na ire ere na ebe a. Enwere m ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ịchọọ ịtọzi ọkụ m ma na-atụ anya ịrụ ọrụ ọzọ dịka ọ nwere ike ịmebe ya na iji ya ma ọ bụ ugboro abụọ. dị ka onye na-eto eto 14 n'eziokwu nakwa na ọ dị egwu na ị na-arụ ọrụ gị.
osụk site ttravis on Tus, 10 / 16 / 2018 - 23: 30
Na zaghachi hey hey by boatman350
Idem! M ga-achọ…
Idem! M gaara eche na ị dị nnọọ okenye. Ị dị mma maka afọ gị. Ahụmahụ ị nwetara ga-enyere gị aka ná ndụ. Nanị aro m bụ ka ị gụnye ọnọdụ gị na gbakwunye, ọ dịkarịa ala obodo na obodo ma ọ bụ koodu zip ka ndị mmadụ mara ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịga bulie ya. Ekwadoro m ka ị na-edebe ụgbọ ala ma chọpụta ụgbọ mmiri iji tinye ya, mana nke ahụ bụ naanị m. Achọ m ka m nwee ike nweta ụfọdụ n'ime ihe ndị m na-ere kemgbe ọtụtụ afọ. M na-atụ anya ịnụrụ banyere ọrụ ọzọ gị.
osụk site boatman350 na òtù ezinụlọ, 10 / 17 / 2018 - 08: 06
Na zaghachi Idem! M ga-achọ… by ttravis
ekele m nke ukwuu ...
Enwere m ekele nke ukwuu na nke a bụ eziokwu nke ụgbọ mmiri ahụ zụtara m maka iji nyochaa ọpụpụ na njem
osụk site boatman350 na òtù ezinụlọ, 10 / 17 / 2018 - 08: 07
ekele na ezi echiche iji tinye ebe na ad.
osụk site thaskew01 na Solomon, 11 / 26 / 2018 - 00: 01
Lightwin prop iwepu
Kedu usoro ị ga-esi wepụ ihe dị n'ime ọkụ? Ọ bụ 1959 nlereanya 3030.
osụk site ttravis na Solomon, 11 / 26 / 2018 - 11: 50
Na zaghachi Lightwin prop iwepu by thaskew01
O nweghị ihe ọ ga-eme .... Wepu okpu na ntanye akwa, gbanwee ntutu, wepụ onye na-ekpofu ihe, wee dọpụta ya. Lezienu anya ka unu ghara ida uzo.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, ka anyị mara. Nke a bụ a ihe osise ya mere ị ga-ahụ otú o si abịa.
osụk site ulo dloft on Tọs, 08 / 01 / 2019 - 14: 51
Ehi? Ma ọ bụ nke ahụ ọ kụrụ aka? Slap ike?
Azụtara m Lightwin 3 dị ọcha n'oge na-adịbeghị anya. Agbasoro m usoro ntụrụndụ a na-atụ aro ma nyocha onye impellor. Seemedgbọala ahụ dị ka ọ lekọtara nke ọma mana ọ gbabeghị ma ọ bụ gwagbuo n'ụzọ ọ bụla. Ọ malitere na ntinye nke atọ mgbe ọ dịkarịa ala 30 afọ nchekwa. Mgbe ntakịrị ntakịrị gasịrị, ọ na-agba ọsọ nke ọma ruo obere oge n'ihi na enweghị m ya na mmiri. Edozichara m tank ka o nwee ike na-agba ọsọ ogologo oge tupu ịmalite ya ọzọ. Ejiri m usoro nkedo n'ihi na ọ siri ike. Mgbe m gbara ya ihe dị ka nkeji 5 na ntọala nkedo dị iche iche wee bido ịgba ọsọ. Achọpụtara m ụda mkpọtụ doro anya nke na-anọghị na mbụ. Amaghị m ma nke a bụ ụda na-esite na injin ahụ ma ọ bụ site na ihe ọzọ dị ka lubed ọhụrụ a na-eme ka ọ pụta ìhè. Naanị otu m siri mata ịkọwa ya bụ ọgba aghara na oke ọsọ. Amalitere m ichegbu onwe m banyere oke ekpo ọkụ n'ihi ya m mechiri ya, chere minit ole na ole wee malite ịmalite ịnụ otu ụda ahụ. Na obere nkedo ọ dara ụda dị mma. Mmiri na-esi n’ọdụ ụgbọ mmiri Exhaust dị ka ekwesịrị (echere m). Ana m ekele gị na ndị mmadụ na-ekwupụta echiche gị na nke a. Cheers.
osụk site ttravis on Fraị, 08 / 02 / 2019 - 14: 03
O siri ike ịkọ. A video ga…
O siri ike ịkọ. Vidiyo ga-enyere ọtụtụ aka. Lelee mkpuchi injin na injin dum iji jide n'aka na kposara niile ahụ siri ike. Ga - enweta echiche kacha mma banyere ihe na - eme ma ọ bụrụ na ọsọ karịa. Agaghị m atụ egwu ịkwanye ya na obere ọdọ. Were akwa. Enwere olile anya, ị gaghị achọ ya!
osụk site ulo dloft on Tus, 08 / 06 / 2019 - 16: 59
Na zaghachi O siri ike ịkọ. A video ga… by ttravis
Ehi, gbuo, tie aka
Daalụ maka nzaghachi
Saịtị a bụ naanị ebe m nwere ike ikwu nke a ma mara na ndị na-agụ akwụkwọ ga-aghota kpamkpam. Enwere m ọgba tum tum .... mana enweghị m ụgbọ mmiri - LOL. Azụrụ m moto ahụ na mbu, enweghị ike ịfefe ya. Yabụ ugbu a, aga m anagide nyocha ya na sọlfọ m juputara na mmiri. Banyere mkpọtụ ahụ, anara m ndụmọdụ gị wee gafere ihe niile na-achọ akụkụ ahụ rụrụ arụ. Ajiputara m mkpụ ahụ ma chọpụta na akwara etiti ahụ tọgbọ chakoo. Mgbe m gwuputara sistemu azụ ma na-agbadata ya dịka nke a nwere ike ịbụ onye mere mpụ. Seemslọ yiri ka ọ na-eme ka mkpọtụ na-ada ụda dị ka mgbịrịgba. Mgbe m nwara ijiji ya ozo oyuzo nke mere emebi emebi a, aga m emelite unu niile ma m dozie ya. Cheers.
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 08 / 07 / 2019 - 01: 05
Na zaghachi Ehi, gbuo, tie aka by ulo dloft
Ọ ka mma imebi oge opupu ihe ubi ...
Ọ ka mma imebi oge opupu ihe ubi. Mmiri 18-6501 weghachi maka Johnson / Evinrude Kpachara anya ma ekwekwala ka ihe ahụ duhie gị.
Enwere m ọtụtụ ihe karịa ụgbọ mmiri. E nwere nd ị na-agbazinye ego mgbe niile.
osụk site Aahpoo on Fraị, 08 / 09 / 2019 - 17: 39
Inwe oge ịchọta onye ga-anọchi ya n’elu iko afere dị n’elu breek dị motors. Ndu ọ bụla ga-abụ ihe egwu!
osụk site ttravis on Fraị, 08 / 09 / 2019 - 19: 45
Na zaghachi 1955 Johnson 5.5hp by Aahpoo
M tinye ndị a n'otu ọnwa…
M tinye ihe ndị a n'ọnwa gara aga
osụk site FelixMcC Na Sun, 08 / 11 / 2019 - 15: 35
Moto na-agba ọsọ ..
Ekele izizi maka saịtị ahụ dị egwu o nyeerela m aka nke ukwuu iweghachi 67 3hp Evinrude. Emere m ka m wughachi usoro ịgba ọkụ ma ugbu a moto na-agba.
Nsogbu nke ozo. Ugbu a m nwere moto ahụ na-agba, m na-achọpụta na ọ na - ekpo ọkụ n'ezie - ọ dị oke ọkụ itinye aka gị. Ọ bụrụ na m fụọ mmiri n'isi ya, ọ ga-efe efe. Agbasoro m usoro gị wee dọpụta isi, kpochapụ mkpuchi ọdụ ụgbọ mmiri wee kewapụ isi ike na mpaghara ala. Ebe ndị gbara gburugburu cylinder ahụ dị ọcha. Amalitere m ụzọ ahụ site na nbanye mmiri ọla kọpa ruo na mbupụta ma ihe niile dị ka nke doro anya. Mgbe m na-agbawa mmiri mmiri gbazere n'olulu ndị dị na ala ala. Ebe ozo ka enwere ike igbochi mmiri iyi ya? Kedu ihe m ga-elele ọzọ?
osụk site ttravis Na Sun, 08 / 11 / 2019 - 22: 35
Ogba Na-agba Oku.
Felix. Ihe niile m maara bụ ihe dị n’ime isiokwu ahụ. Enwere ọtụtụ mmadụ mmadụ maara ọtụtụ ihe, na m apụtakarị ihe karịa m https://www.facebook.com/groups/2126052714312567/ Aga m akwado ndị otu facebook dị ka ebe iji jụọ ụfọdụ ndị folks maara ihe ha na-ekwu.
Maka m, aghaghi m ịnọgidesi ike na ịchụso ụzọ mmiri ....... Tom
osụk site FelixMcC na Solomon, 08 / 12 / 2019 - 08: 01
Na zaghachi Ogba Na-agba Oku. by ttravis
Daalụ maka nzaghachi Echere m na echere m ya. Edebere m akụkụ ahụ dị ala na mpaghara ụfọdụ tupu ịnya na-agba moto. Mgbe m weghachiri ya, achọpụtaghị m na mmiri ọkpọ ahụ kwesịrị ịbanye na ebe kwesịrị ekwesị / ọdụ ụgbọ mmiri nke dị na ụlọ impeller. Adịghị emegharị mmiri ahụ gburugburu na mbara igwe. Ikewapụ isi ahụ na mpaghara dị ala na-awụpụ mmiri n’ime mmiri wee mezie ikuku abịakọrọ ka ị manye mmiri site na sekit iji hụ na mmiri nwere ike ikesa.
Atụrụ m anya nwalee ya ọzọ ka ọrụ gachara. Chọrọ m chi.
Daalụ maka njikọ facebook !!!
osụk site ttravis na Solomon, 08 / 12 / 2019 - 20: 18
Nke ahụ bụ obere anụrị…
Nke ahụ bụ obere anụrị na-atọ ụtọ iji rụọ ọrụ. Jisie ike. Obi siri m ike na ị ga-arụ ya. Nwee obi ụtọ n'òtù Facebook. Gwa ha na m zitere ya! Otu nwoke bidoro ebe ahụ bidoro dozie moto dị ka nke a. Jisie ma mee ka anyi biputere.
osụk site FelixMcC on Tus, 08 / 13 / 2019 - 09: 45
Na zaghachi Nke ahụ bụ obere anụrị… by ttravis
Odogwu Ogba Mgbahara
Ee-ọ bụ obere igwe na-atọ ụtọ iji rụ ọrụ. Agbanwere m mmanụ gia na prop ahụ tupu m tụọ ya ọkụ ọzọ maka na ọ na-eme mkpọtụ ntakịrị. Mmanụ ahụ pụta dị ka apịtị isi awọ !! Ana m eche na ọ nwere ike ịbụ nke mbụ. Akwanyere m ya ọkụ ọzọ ugbu a ọ na-agba ọsọ nke ọma ma dịkwa mma ma mara oke mma. Ọ dịla njikere maka ule a na-agba n'okirikiri ngwụsị izu a.
Ọ bụ nnukwu moto iji mụta ịrụzi ya ka ọ dị mfe ijikwa na ịrụ ọrụ. Ahuru m ya n’ebe a na-ere teepụ maka $ 50 afọ ole na ole gara aga ma hapụ ya ka ọ nọrọ ọdụ nwa oge. Na ngwụcha, asachapụ ma wughachi carb, wụnye isi ihe dị iche iche, coils na condensers, dochie eriri mmanụ ahụ, kpochaa tank ahụ, hichaa ụzọ iji mee ka mmiri dị mma (gbutu akpa m maka isi ike, ọdụ ụgbọ mmiri na isi), ma gbanwee mmanụ ahụ na prop. Akụ na akụrụngwa na-efu m ihe dị ka $ 150 - yabụ na ha niile bụ nnukwu ọrụ na enweghị ọnụ ma ugbu a enwere m nnukwu ọkwọ ụgbọ ala iji duru m gaa ọdọ mmiri na ọdịda. Daalụ maka idekọ ọrụ gị. Agaghị m enwetatụ ihe a site na enweghị ntuziaka gị.
Echere m na agbajiri m anya na m ga-achọ obere moto ọzọ ka ọ wughachi - ọ ga - amasị m ịnweta aka m na 2hp Johnson site na mmalite 70….
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 05 / 2019 - 13: 44
Na zaghachi Odogwu Ogba Mgbahara by FelixMcC
Obi dị m ụtọ na ị bụ…
Obi dị m ụtọ na ị gara nke ọma. N’olile anya, I ghafere ndi nke ahu rue ndi n’abia n’iru.
osụk site ArTam2019 na òtù ezinụlọ, 08 / 14 / 2019 - 10: 52
Agba na decals
Ana m amalite mweghachi m na Lightwin 3HP nke m chere na o sitere na 1952-1954 dị ka Oghere Usoro ahụ bụ 3012. Ọ ga-amasị m ozi gbasara koodu agba ma ọ bụ ọbụnadị aha ụda ọ dị? Ọzọkwa m ga-enwe ekele maka ndụmọdụ maka ebe m ga-esi nweta nkọwa maka ya?
osụk site ttravis na òtù ezinụlọ, 08 / 14 / 2019 - 18: 02
Na zaghachi Agba na decals by ArTam2019
Ama m na ha dị.
Enwetụbeghị m onwe m moto. Ọ masịrị m ka m mee ka ha na-agba ọsọ ma jiri ha. Nke ahụ kwuru, amaara m ụyọkọ ndị mmadụ nwere mmasị na ya. Lelee nke a Òtù Facebook. Eji m n’aka na ha ga-enyere gị aka.
osụk site prob6789 on Tus, 08 / 27 / 2019 - 22: 47
Ajuju banyere wires.
Na mbu, ekele maka nnukwu webusaiti na nnukwu akụ. Achọpụtara m na Evinrude lightwin 3hp nwere wires na-adịghị mma. Enwere m ike ịzụta wires ọ bụla na eBay ma ọ bụ AutoZone (ọ bụrụhaala na ha dabara n'ezie) ma jiri ndị a? Ka m chọrọ ịzụta nke akọwapụtara? Echere m na waya bụ waya na enweghị nkpa. Enwere m ihe ọjọọ?
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 05 / 2019 - 13: 40
Na zaghachi Ajuju banyere wires. by prob6789
Site na 5.5 HP Project:…
Site na 5.5 HP Project:
Inyocha ebua nkwụnye wires na Dochie ọ bụrụ Dị Mkpa - Ọ bụ ezie na ị nwere isi stator gị, ọ bụ oge dị mma iji nyochaa nkwụnye ọkụ ị na-agbanye wired maka oge ọ bụla nke akwa ma ọ bụ mmebi. N'ọnọdụ m, a na-agbazi ngwụcha nke nkwụnye m ngwa ngwa n'ihi ya, echere m na ọ bụ ohere dị mma iji dochie ihe ntanye ọkụ. Mgbe m jesịrị ịzụ ahịa ọtụtụ ugboro, achọpụtara m na wiwi 22-inch nkwụnye ọkụ ndị rere na NAPA adịghị ezu. M merụrụ ahụ gaa ebe a na-akpọ Tractor Supply ma zụta otu setịpụ nke 4 ntanye ntanetị maka gburugburu $ 10. Rịba ama na e nwere ihe dị iche n'etiti wiwa ndị siri ike "siri ike" eji mee ihe na ụgbọala ndị ochie na ụgbọ mmiri na "ndị isi" carbon "nke eji eme ihe taa nke na-egbutu ihe ọkụkụ eletrik nke na-eme ka mgbasa ozi na mgbasa ozi dị otú ahụ. O doro anya na ị ga-ahụ maka wires ndị siri ike na ndị a. N'iji ogbugba ochie na-agbanye wired dị ka ụkpụrụ na ikwe ka ihe dịkwuo sentimita n'ogologo, m na-ehichapụ wiwa ọhụrụ ruo ogologo ma mee ka ha dị n'otu ụzọ ahụ na ala nke plaọ stator. Amaghị m ihe iwu ga-eji dochie ihe ọkụ ọkụ na-agbanye wired ma ọ bụ na m na-achọpụta mgbe m gafesịrị afọ 50, ọ dị mkpa ka a dochie ha! A gwawo m na ọtụtụ ụgbọ mmiri na ebe ndị na-arụ ọrụ mmiri na-enwe ụdị ígwè a siri ike na-emegharị ma nwee ike belata oge dị gị mkpa, tinye obere akpa akpụkpọ ụkwụ na ejiri m n'aka na ha ga-arụ ọrụ nke ọma.
18-5225 Marine Spark Plug Wire Kit maka ngwa mpụga wth Igwefoto Magneto. (Ọla kọpa isi)
osụk site Benlightwin na òtù ezinụlọ, 08 / 28 / 2019 - 23: 05
sere mmalite akpụgharị armature efere aka trottle
Etupụrụ m otu ọkụ ọkụ 1959 3030 Evinrude gbasoro ntụrụndụ na ntuziaka carb ebe a nke ekele dị egwu! Gbalịa rụọ ọrụ obere moto ọ bụla ma nwee ọfụma ọfụma mgbe ụgbọ ala kpụrụgharị ma dochie ihe niile dị na efere armature, isi ihe na mkpuchi.
Agbanyeghị, akpọrọ m eriri aka aka armature aka na ihe a na-ebute na mmanụ ụgbọ mmiri ebido ebido. N'ihi na mgbe m dọtara mmalite, aka ahụ na-akpali nza ma na-agabigakwa n'ọnọdụ nkwụsị. Echiche ọ bụla bụ efere armature na-ejide na flywheel ma ọ bụ ihe ọ bụla aro ị ga-edozi?
osụk site Benlightwin on Tọs, 08 / 29 / 2019 - 23: 45
Na zaghachi sere mmalite akpụgharị armature efere aka trottle by Benlightwin
Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ nwere otu…
Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ nwere otu nsogbu ahụ edobeghi ihe mkpuchi ahụ tere aka na flywheel ma na-achọ, jide n'aka na ha kwụ n'ahịrị na akara ndị dị na efere Armature. Peoplefọdụ ndị nọ na Evinrude Johnson 3hp ndị nnabata Facebook peeji Facebook zara ngwa ngwa.
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 05 / 2019 - 13: 35
Na zaghachi Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ nwere otu… by Benlightwin
Ndo, anọ m ezumike,…
Ndo, a nọrọ m ezumike, pụọ na ịntanetị izuụka gara aga mgbe ị biputere nke a. Obi dị gị ụtọ red chọpụta ya na ekele maka ịhapụ ozi bara uru onye ọzọ ga-enweta enyemaka. Tom
osụk site tunafish75 on Tus, 09 / 03 / 2019 - 19: 02
Ogwe aka aka ghacha
Egwuruola m ihe m nwetara ọhụụ na ntụkwasị obi 1958 Lightwin 3hp. Otu ihe m na-ahụ bụ na aka armature plate ahụ a na-ete bụ ihe siri ike na iyi akwa. Echiche ọ bụla maka ihe ị ga-eme idozi?
osụk site ttravis on Tọs, 09 / 05 / 2019 - 13: 33
Na zaghachi Ogwe aka aka ghacha by tunafish75
Echere m na ọ bụ n'ụzọ ahụ site na…
Echere m na ọ bụ ụzọ ahụ site na iji aka mee ka sọsọ ahụ dịrị n'ọnọdụ. Nke a dochie anya onye ọhụụ nke eji eji mmiri eji ebu mmiri nke ọ ga-alaghachi na-abaghị uru ọ bụrụ na ị hapụ aka ahụ. Ndi m na eme otu ihe.
osụk site backwater52 on Tọs, 09 / 19 / 2019 - 13: 13
Have nwere akwụkwọ ntuziaka ọrụ ma ọ bụ jikọta otu?
osụk site ttravis on Nọdụ, 09 / 21 / 2019 - 14: 34
Na zaghachi Ndi nwe ohuru nke 3302 by backwater52
Ọ bụghị akwụkwọ ntuziaka ọrụ mana: https://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Outboard%20Boat%20Motor/Evinrude%20Johnson%203%20HP%201952-1954%20Owners%20Manual.htm
osụk site Troy Gessner on Fraị, 09 / 20 / 2019 - 14: 42
Agam emechazigharị ihe nlere 1966 Lightwin nlereanya 3602 ya na ụgbọ ala wughachi, isi ọhụụ na ebe nchekwa, mbido mmiri ọhụụ, mmanụ eji ebu ihe ọfụma.
Ngwunye mmanụ / mmanụ a na-akpọ maka akwụkwọ ntuziaka ọrụ Evinrude bụ 16: 1. O nwere onye nwere ihe omuma ohuru nke nwere ike ikwe ka iji ihe di iche? Achọrọ m naanị n'ihi na ụgbọ mmiri Tohatsu M8B nke ụgbọ mmiri m na-ewe 50: 1 na ọ ga-akacha mma ka ịchekwa otu ụdị mix gburugburu.
N’ezie enwere m ndabara na ndụmọdụ ndị nrụpụta, ọ gwụla ma enwere data dị mma nke na-egosi usoro ọzọ anakwere. Enwere m ezigbo ahụmịhe nke ụlọ mnya na ịgba ọsọ 2t, yabụ enwere m nghọta nke oke nkpa nke agwakọta ngwakọta kwesịrị ekwesị.
Anyone nwere onye nọ ebe a ejirila ihe dị iche na ihe ịga nke ọma, ma ọ bụ nkwanye ọ bụla emelitere dị site na Evinrude?
osụk site ttravis on Nọdụ, 09 / 21 / 2019 - 14: 27
M ga-eso 24: 1 ma ọ bụ 32: 1 ma ọ bụrụ na ọ na-a smụbiga mmanya ókè. TCW3 ha na-ere taa ka mma karịa ihe ochie.
Peeji mbụ «Nke mbụ
Obere ihu <Nke gara aga
Ibe akwukwo a 2